MCSA yakavimbiswa Professional - Hurukuro Mibvunzo Nemhinduro | ITS
Microsoft inopa zvikwangwani zvakakosha zvakabuda kunze kwekuti Microsoft Certified Solutions Associate kana MCSA vhidziro inodzidzisa iwe nenzira dzakakosha kuti ugumise kuonekwa kwePC network authority kana mutungamiri wepasitori. Tsvaga mibvunzo miviri inotarisana nenharaunda yakawanda yakabvunzwa kune MCSA dzakavimbiswa.
1. Chii chinonzi chikamu chekushanda?
An: Zvikamu zvekushanda mapepa mapurisa ayo anodzokororwa kune vatongi vemo. Aya ndiwo chikamu cheAlex Directory. Vatongi vemukati vanobatanidzwa muhutano hwemapurogiramu emapurisa vane kubereka kwechikamu ichocho. Unhu uye unhu hwekushandisa zvikamu zvinogona kuderedza kushanduka kwekudzoka. Izvo zvikamu zvinoshandiswa zvinogona kuisa pfungwa pane imwe nzvimbo munzvimbo inenge isina nzvimbo zvachose kufanana nenharaunda yenharaunda zvikamu. Izvi zvinoita kuti zvive nyore kuwana nekuwedzerwa.
2. Ndeipi nzvimbo yeAlex Directory database?
A: The Active Directory database inodzingwa pane vatongi vepasi uye inowanikwa kuburikidza nemagetsi ekushandisa. Nzvimbo dzose dzinogona kunge dziri vatongi vekuchengetedza uye dzichengetedze kabhuku yeAlex Directory database mu C: \_ windows \_ Ntds \_ Ntds.dit
3. Ndezvipi zvitsva zvinowanikwa mu Active Directory muWindows server 2008?
A: Verengai muchengeti wemunharaunda chete uye Nemafuta Gwaro Rekunyora Purogiramu
4. Chii chinonzi Windows Server Backup?
A: Windows Server Backup inhengo yakasunungurwa yeWindows 2008 iyo inopa mikana yakasiyana-siyana pakuderedza mashoko paPC yako kana pane chiitiko chekunyadziswa kwepakadzika kana chero zvimwe zvakakosha. Windows Backup Backup inogona kusimbisa zvinyorwa zviviri kune yese server. Ikusimbiswa kwevhavha inowanikwa kuburikidza nemirairo yekuraira uye kutungamirirwa kwehutungamiri.
5. Ndezvipi zvinopfuura kuburikidza ne disks?
An: Kupfuura nepamukati isaiti yepanyama inoshandiswa pakubvisa miviri yakazara uye ine denderedzwa uye urongwa hwemagwaro.
6. Ndezvipi zvinokonzera madharairi?
Maikirwo emagetsi anosiyanisa uye akakwirira kune izvo zvinyorwa zviri mumabasa avo. Havana kutevedzera imwe purogiramu ive kuti sezvazvingaita, ita imwe gadget yakaoma yakaoma pane imwe nzvimbo.
7. Chii chinonzi desktop virtualization?
Kodzero yekodzero yepamusoro ndiyo nzira inonzwisisika yekuvhara uye kuderedza OS kana hurumende kubva kune mutengi akagadzirira kuigamuchira. Iko kune marudzi mazhinji edeskodhesi zvinyorwa zvinoshandiswa zvimwe zvekuti zvinosanganisira makirini chaiwo asi vamwe vasingaiti. Pakaitika kuti hurongwa hwekushanda hwakarongedzwa uri woga, vatengi vanoda kuwana ma desktop avo kuburikidza nehutaneti vachizivisa nekokorodzano yekuratidza kure. Kugadzira kwekodhidhi yekusimudzira kunoitwa mubazi rebazi. Pakati pemitsetse iyi, kushandiswa kwakafanana nemapiritsi kunogona kubatanidza maIndaneti yemagetsi. Iyi mishonga inowanikwa inogona kuwanika nemunhu uye inogona kugadzirwa nenzira yaanoda nayo. Iyi ndiyo nzira inonyanya kuzivikanwa uye yakajeka yekuwana nekushandisa purogiramu yekusimudzira.
8. Chii chinonzi cache chebazi?
BranchCache ™ inotarisirwa kuwedzera kushandiswa kwemashandisirwo uye kuderedza kushandiswa kweWAN kushandiswa kuitira kuti mavhavhari anogona kuwanikwa kubva kumativi ari kure. Iyo PC yakadzika inoshandisa cache yemashoko anochengeterwa munzvimbo ino kuti kuderedza kufamba kune LAN kuungana. Nyaya yacho inogona kubviswa pavhareji mubazi (Yakagadzirirwa Cache mode) kana inogona kugoverwa pamusana pemakombiyuta evanhu (Distributed Cache mode).
9. Chii chinonzi Direct Access?
Direct Access inopa vashandi kuwana mawebsite, mapurogiramu uye nzvimbo dzekunyoresa zvinyorwa zvekuchengetedza pasina ruzivo rwekutaurirana nehutachiona hwehutachiona hwepachena (VPN). Indaneti inonzi iyo inonziwo purogiramu yega yega kana intranet. Nguva imwe neimwe PC Access-inopa simba inopindirana neInternet, pasinei nokuti zvinoita kuti izvi zviitike musikana asati aisa, Sign Access inogadzirisa kuwirirana kwe-bi-directional neyo mukati memutambo. Vatengi havadi kuti vafunge kuwirirana ne intranet. Makombiyuta ari kure anogona kutarisa kunze kwenzvimbo yebasa neI IT Administrators, zvisinei kana makombiyuta asina kubatana neVPN.
10. Chii chinonzi DAC?
Microsoft Dynamic Access Control kana DAC inofambisa mashoko ekushandisa muWindows Server 2012 inobvumira vatungamiri kuti vatungamirire zvirongwa zvekuwana. Inoshandisa nzira dzakagadzikana dzekutendera vatungamiri kuti vaongorore avo vanosvika zvinyorwa zvese. Zvinyorwa zvinogona kuumbwa mumuviri kana zvakasikwa.